Cilmi-baarayaal badan ayaa u muuqda in ay qabtaan aragtiyo is burinaya ee IRB. Dhanka kale, waxay u arkaan in ay tahay xuduud shaqo oo xaaraan ah. Hase yeeshee, isla mar ahaantaa, waxay u arkaan in ay tahay garsooraha kama dambaysta ah ee go'aannada anshaxa. Taasi waa, cilmi-baarayaal badan ayaa u muuqda in ay rumaysan yihiin in haddii IRB ay ansixiso, ka dibna waa inay ahaato mid sax ah. Haddii aan qirsano xadidnaanta dhabta ah ee IRBs sida ay hadda yihiin - waxaana jira qaar badan oo iyaga ka mid ah (Schrag 2010, 2011; Hoonaard 2011; Klitzman 2015; King and Sands 2015; Schneider 2015) - markaan cilmi-baadheyaashu waa inay qaadaan masuuliyad dheeraad ah ee anshaxa cilmi-baarista. IRB waa dabaq aan lahayn dabaq, fikradana waxay leedahay laba saameyn oo waaweyn.
Ugu horreyn, IRB waa dhul dabiici ah macnaheedu waa haddii aad ka shaqaynayso xarun u baahan dib-u-eegis IRB, waa inaad raacdaa xeerarkaas. Tani waxay u muuqan kartaa cad, laakiin waxaan ogaaday in dadka qaarkood ay u muuqdaan inay rabaan inay ka fogaadaan IRB. Xaqiiqdii, haddii aad ka shaqeysid aagagga aaminka ah ee aan saldhig u lahayn, IRB waxay noqon kartaa xulaf xoog leh. Haddii aad raacdo xeerarkooda, waa inay istaagaan adiga haddii ay wax khaldan yihiin cilmi-baaristaada (King and Sands 2015) . Haddii aadan raacin xeerarkooda, waxaad ku dhameysan kartaa adiga oo ku jira xaalad aad u adag.
Marka labaad, IRB ma aha dabiicid micnaheedu waa uun buuxinta foomamkaaga oo raacaya xeerarku kuma filna. Xaaladaha badan ee aad tahay cilmi-baaraha ayaa ah kan ugu yaqaana sida ugu dhaqsaha badan ee ku dhaqmidda hab-dhaqanka. Ugu dambeyntiina, waxaad tahay cilmi-baadhaha, iyo masuuliyadda anshaxa ayaa kula jooga; waa magacaaga waraaqda.
Hal siyaabood oo lagu hubin karo inaad IRB u adeegsanayso dabaq oo aan dabiicigu ahayn in lagu daro waraaqaha akhlaaqda ee waraaqahaaga. Xaqiiqdii, waxaad ku qori kartaa lifaaqa anshaxaaga ka hor inta aanad bilaabin waxbarashadaada xiitaa bilaabmayso, si aad adigu u xoogeysatid inaad ka fekerto sida aad u sharaxi doonto shaqadaada asxaabtaada iyo dadweynaha. Haddii aad dareentid inaad naftaada ku faraxsan tahay adoo qoraya lifaaqa akhlaaqda, markaa daraasaddaada waxaa laga yaabaa inaanay ku dhicin dheelitirka anshaxa ee ku haboon. Marka lagu daro in lagu caawiyo baaritaanka shaqadaada, daabacaadda akhristayaasha anshaxaaga waxay ka caawin doontaa bulshada cilmi-baarista inay ka hadlaan arimaha anshaxa iyo in la dhiso caadooyin ku haboon oo ku salaysan tusaalooyinka baaritaanka dhabta ah ee baaritaanka. jadwalka 6.3 waxay soo bandhigaysaa waraaqo cilmi baaris ah oo aan u malaynayo in ay leeyihiin wada-hadal fiican oo ku saabsan anshaxa cilmi-baarista. Anigu kuma raacsanayn arin kasta oo ka mid ah qorayaasha doodahan, laakiin dhammaantood waa tusaalayaal cilmi-baarayaal ku shaqaynaya sharafta leh ee micnaheedu yahay Carter (1996) : kiis kasta, (1) cilmi-baarayaashu waxay go'aansadaan waxa ay u maleynayaan inay sax yihiin iyo waxa qaldan; (2) waxay ku dhaqmaan iyagoo ku salaynaya waxa ay go'aamiyeen, xitaa kharashka shakhsi ahaaneed; iyo (3) waxay si cad u muujinayaan in ay u dhaqmaan si waafaqsan falanqaynta anshaxa ee xaaladda.
Jadwalka 6.3: Waraaqo leh Wada-hadal xiiso leh ee Anshax-darrada Cilmi-baaristooda
Arrinta la xalinayo
Rijt et al. (2014) Denbiyada gudaha ee aan oggolaan
Ka fogaanshaha waxyeelada macquulka ah
Paluck and Green (2009) Imtixaanaadka gudaha ee waddanka soo koraya
Daraasad ku saabsan mawduuc xasaasi ah
Arimaha ogolaanshaha ee adag
Bixinta waxyeelada suurtogalka ah
Burnett and Feamster (2015) Cilmi baaris la'aan
Isu dheeli tirka khatarta iyo faa'iidooyinka marka ay halis tahay in la qiyaaso
Chaabane et al. (2014) Saamaynta bulshada ee cilmi-baarista
Isticmaalidda faylasha xogta sirta ah
Jakobsson and Ratkiewicz (2006) Denbiyada gudaha ee aan oggolaan
Soeller et al. (2016) Xadgudubyada adeegga